आफैलाई प्रेम गर्नुस: सुखी हुने सूत्र – MEDIA DARPAN
आफैलाई प्रेम गर्नुस: सुखी हुने सूत्र
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Nov 12, 2018
यसमा दुई मत छैन कि हरेक मानिस जीवनमा सुखी र खुसी रहन चाहन्छन् । तर, यस्तो चाहना सबैको पूरा हुँदैन ।
धेरै मानिसहरु कुनै न कुनै कुरामा असन्तुष्ट हुन्छन् । आफूले चाहेको जस्तो नहुँदा वा कुनै काममा असफलता भोग्दा मानिसलाई आफ्नो जीवनै बेकार पनि लाग्नसक्छ । लगातारको असफलता भोगेका मानिसहरुमा त अत्यधिक नकरात्मक सोच उत्पन्न हुन सक्छ र उनीहरुले आफैलाई घृणा गर्न थाल्छन् । उनीहरुले जीवनदेखि नै हार मानिसकेका हुन्छन् ।
के तपाईंले पनि आफ्नो जीवनमा यस्तै समस्या भोग्नु भएको छ ? वा, आफ्नो जीवन तनावै तनावमा गुज्रिरहेको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
यदि यस्तै हो भने आज हामी तपाईंलाई आफ्नो मनबाट घृणालाई बाहिर पछारेर आफैँलाई प्रेम गर्ने तरिकाहरु सिकाउन गइरहेका छौं ।
जबसम्म आफ्नै आलोचना गर्न बन्द गर्नुहुन्न, तपाईंले कहिल्यै आफूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न । आलोचनाले कहिल्यै राम्रो नतिजा ल्याउँदैन ।
अरुले गर्ने नकारात्मक आलोचनाहरुलाई सुनेर मनमा राख्यो भने पनि त्यसको धेरै नराम्रो प्रभाव पर्छ । त्यसैले आफूलाई पहिचान गरेर आफ्नो असली तागतलाई बुझ्नुहोस् ।
यसको समाधानको लागि यस्तो बाटो खोज्नुहोस् जसले तपाईंलाई मानसिक रुपमा खुसी मिल्नेछ । सोच्नुहोस्ः जब मलाई डर लाग्छ, म पछाडि फर्केर हेर्दिन र आफ्ना आमाबुबा वा परिवारको बारेमा सोच्छु ।
यस्तै, जब तपाईं डर महसुुस गर्नुहुन्छ, कुनै अर्को अविस्मरणीय कुरा सम्झिन थाल्नुहोस् जसले तपाईंको डर भाग्नेछ ।
उदाहरणको लागि तपाईं धेरै ढिलो उठ्नुहुन्छ । यो एक नकारात्मक बानी हो । ढिलो उठ्नाले मानिस अल्छि हुन्छ र अल्छीले असफलतालाई निम्त्याउँछ । असफलताका कारण मानिस आफैलाई घृणा गर्न थाल्छ ।
यसको उपाय केही छ भने त्यो छिटो उठ्ने बानी बसाल्नु नै हो । छिटो कसरी उठ्ने भन्ने उपाय खोज्नुहोस ।
कुनै पनि काम गर्नको लागि शारीरिक रुपले स्वस्थ रहन धेरै आवश्यक छ । यसका लागि सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायामको आवश्यकता पर्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिको मुहार सँधै उज्वल रहन्छ र उ मानसिकरुपले मजबुत रहन्छ ।